एटिएम फ्रड र यसको रोकथामको विषयमा कार्यक्रम हुँदै - Living with ICT
Home / Featured / एटिएम फ्रड र यसको रोकथामको विषयमा कार्यक्रम हुँदै
एटिएम फ्रड र यसको रोकथामको विषयमा कार्यक्रम हुँदै
प्रमुख वक्ता : विक्रम श्रेष्ठ
नेपालमा पछिल्लो समय एटिएम फ्रडका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा इन्फर्मेशन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपालको आयोजनामा यसको रोकथामबारे कार्यक्रम हुँदैछ ।
शुक्रबार भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित स्वस्तिक कलेजमा विहान ७ बजेदेखि हुने कार्यक्रममा प्रमु्ख वक्ताको रुपमा इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका ई-बैकिङ एवं आइएसओ हेड विक्रम श्रेष्ठ रहने छन् ।
पछिल्लो दशकमा नेपालमा एटीएमको प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ हजारभन्दा बढी एटीएम मेसिन सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ४६ लाखभन्दा बढी डेबिट कार्ड, ५२ हजार भन्दा बढी क्रेडिट कार्ड तथा ८२ हजारभन्दा बढी प्रिपेड कार्ड जारी गरिसकेका छन् । एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी एटीएम कार्ड जारी गर्दै गइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ एटीएम कार्डको सुरक्षामा भने पटक्कै ध्यान नदिएको गुनासो छ ।
पछिल्लो समयमा भइरहेका एटीएम ह्याक प्रकरणले फेरि बैंकिगं सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा हुन लागेको यो कार्यक्रममा एटिएम फ्रड के हो ? कसरी हुन्छ ? नेपालमा कानूनी अवस्था कस्तो छ ? कस्ता सेक्युरिटी पूर्वाधारहरु अपनाइनुपर्छ ? प्रयोगकर्ता कसरी सचेत रहने ? आदि विषयमा वृहत् छलफल हुने छ ।
Previous भविष्यको आधार आइटी शिक्षा : कुन कोर्स पढ्ने ? कहाँ पढ्ने ?
Next क्यान कमटेक २०१७ सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित वृहत् प्रदर्शनी हो : सुनैना घिमिरे